I-22 oth Ingubo yomzimba ozalwe ngokutsha ngeDolls abavelisi - China 22 ″ Amalaphu omzimba Ukuzalwa kwakhona koonodoli abaXhasi, abaFektri
Ingubo yomzimba woDoli abazalwa ngokutsha
I-18 ″ Ingubo yomzimba woDoli abazalwa ngokutsha
22 oth Ingubo yomzimba woDoli abazalwa ngokutsha
Unodoli opheleleyo wokuzalwa kwakhona kweSilicone
I-18, iQele elipheleleyo lokuzalwa kwakhona koonodoli
I-23, iQele elipheleleyo lokuzalwa kwakhona koonodoli
ZIYIUI Zenziwe ngeSoft Silico ...
I-ZIYIUI 22 55 CM abicah ke ...
I-ZIYIUI 22inch / 55cm izalwe ngokutsha ...
I-ZIYIUI 18 48 CM izalwe ngokutsha ...
I-ZIYIUI eyenziwe ngesandla ngeSoft Silicone
Igama lebrand: ZIYIUI
Ubungakanani boDoli: 18 intshi
I-ZIYIUI Inokwenyani eyi-22 intshi 55cm Ukuzalwa kwakhona kosana oluDoli oluthambileyo lweVinyl Silicone yokwenene Jonga uyaphila Umntwana owenziwe ngesandla oPhilayo njengoBlue idenim yokunxiba
Idoli izakufika nge-magnetic pacifier kunye nebhotile yokondla ukuze ilungele umlomo
Izinto eziphathekayo: Intloko yesilicone ye-vinyl, imilenze ye-3/4 ye-silicone yevinyl enomzimba we-PP womzimba, uthambile kakhulu kwaye awunakungena emanzini wenze ishawa.
Amehlo: Amehlo e-acrylic eTaiwan akumgangatho ophakamileyo, amehlo awasayi kuqhwanyaza.Izinwele: Umgangatho ophezulu we-Mohair, ukufakelwa kweManyuwali, unokuhlamba nokunxiba
Ukhuseleko: Ihambelana neemfuno zokhuseleko ze-ASTM F963 kunye ne-EN71 yeminyaka eyi-3 +
Inkcazo yemveliso: Le ngunodoli ogqibeleleyo ozalwe ngokutsha ngumdwebi odumileyo.
I-ZIYIUI 22 Iphinde yazalwa iNtsana yaBantwana abaDala oonodoli abasandul 'ukuzalwa Izipho zeSilicone zeVinly Babys zokuzalwa
Intloko yesilic nemilenze, kunye nelaphu elithambileyo lomzimba womntwana ukuze azive ngokwenene, ke abantwana banokumhambisa kuyo yonke indawo.
Isandla sisebenzise amehlo aluhlaza kunye neenkophe kunye nesandla esimile mohair, iingalo kunye nemilenze zingashukunyiswa ziye phezulu nasezantsi, ubuso obuthandekayo buya kwenza abantwana bakho bazive bebambe lo mhlobo wonodoli.
KUBALULEKILEYO-Isipho sokuzalwa, isipho seKrisimesi, imisebenzi yasesikolweni, Umsebenzi wasekhaya, Ukudlala indima, Ukukhulisa umdlalo, nina bantwana niyakufumana amandla okuhlala kunye namandla okuqonda.
ISIQINISEKISO SOKHUSELEKO -Ngqinelana okanye sigqithe kwiimfuno zokhuseleko ze-ASTM F963 kunye ne-EN71 yeminyaka eyi-3 +, ekhuselekileyo ebantwaneni bakho.
Inkcazo yemveliso: Olu luphawu lobugcisa bonodoli oluyilwe ngumculi odumileyo.Cute kunye nodoli ozelwe ngokutsha onobomi.Okwenziwe kumgangatho ophezulu wesoftsilicone.Contactable touch.Safe non-toxic, pure eco-friendly materials.Head,
I-Biracial Reborn Baby Baby Doll yaseMnyama yaseMelika Intombazana yaseMelika i-intshi ezingama-22 I-Prime Cute eyiyo yoNtsana woLusu oluNtsundu lwabantwana
Ubomi obunodoli wokuzalwa kwakhona kosana oluyilwe kwaye lwenziwe ngezandla ngumculi we-NPK, eneenkcukacha ezintle kwaye intle kakhulu, izinto ezinjenge-silicone ezinjenge-vinyl zenza ukuba umntwana abe sengqiqweni ngakumbi.
Ubungakanani: i-intshi ezingama-22 / i-55cm ukusuka entloko ukuya ezinzwaneni, Izinto: IVinyl izinto zesilic zentloko, 3/4 imilenze,
Izinwele: ukungeniswa mohair okusulungekileyo, okuncothulwe ngesandla inaliti nenaliti, imingxunya yengcambu yeenwele iyabonakala, iyinyani, iinwele zinokumiliswa emva kokuba uzihlambile kwaye uzomisile ngokwendalo.
Isiqinisekiso sokubuyisa seentsuku ezingama-30, ulwazi olusemthethweni lokulandela umkhondo, iiyure ezingama-24 zenkonzo yabathengi ngeposi. sinesitokhwe e-USA 7-10 usuku lokusebenza lokuhambisa.
Inkcazo yemveliso: Izinto zeVinyl zesilic zentloko, amalungu angama-3/4, ahambelana neemfuno zokhuseleko ze-EN71 ye-EU esemgangathweni yeminyaka eyi-3 +. izinto ze-vinyl zesilicone ezithambileyo njengesikhumba sokwenyani. Umzimba ngumzimba welaphu. Ukuzaliswa kwePP c
I-ZIYIUI 23 Umzimba oPheleleyo we-Silicone Vinyl Reborn Doll Lifelike njenge-Anatomically echanekileyo yoMntwana oyintombazana
I-intshi engama-23 (57cm) ubungakanani bosana olusandul 'ukuzalwa. Ubunzima: malunga ne-3.5LB. Idoli iza kufika ine-pacifier yemagnethi kunye nebhotile yokondla
Isixhobo: Umzimba opheleleyo we-Simulicone Vinyl.
Izinwele: Umgangatho ophezulu we-Mohair, ukufakelwa ngesandla, unokuhlamba nokunxiba.
Lo nodoli ngumzimba opheleleyo wentombazana efanelekileyo.
Inkcazo yemveliso: Lo ngunodoli ogqibeleleyo ozelwe ngokutsha owenziwe ligcisa elidumileyo.
I-ZIYIUI I-intshi ezingama-22 ezizalwa ngokutsha ngeDolls yabantwana enjengelifana nelokuzalwa kosana
Inkcazo yemveliso: Ijongeka iyinyani, ifana nobomi obusandul 'ukuzalwa ukusuka ebusweni bayo obucekeceke ukuya ezinyaweni zayo ezincinci. Ide ize nomzimba welaphu elithambileyo, kuba eyona nto ifana nobomi xa umfunqula.
I-ZIYIUI Ukujonga okwenyani nge-18 intshi yokuzalwa kwakhona kweeDolls zoMzimba eziQhelekileyo zeSilicone vinyl yokwenyani yokuzalwa kwakhona kosana oluyintsana
, Oonodoli benziwe ngesandla kwaye ubunzima bayoba yimpazamo encinci.Umntwana unomzimba opheleleyo we-vinyl othambileyo. Umzimba kunye nobuso obuthandekayo buya kukwenza uzive ngathi ubambe usana lokwenyani.
Isixhobo: i-vinyl yomzimba opheleleyo we-silicone, ingadlala ngokukhuselekileyo ngonodoli kwindawo yokuhlambela, unodoli uthambile kakhulu; Imilenze yodoli inokuba yimisebenzi, inokuhlala ingalala, unako ukungena emanzini; ayiyi kuma, ayikwazi ukuthetha.
Amehlo: Idoli enamehlo evaliweyo, amehlo awanakuvula.Idoll ene-magnetic pacifier inokulingana umlomo.
Izambatho: ezenziwe ngezandla. Ngokobungakanani bedoli. Ingena kubungakanani obusanda kuzalwa (s iinyanga ezi-0-3) iimpahla zomntwana. Unodoli uzakufika kunye neempahla kanye njengoko ifoto ibonisa.
Inkcazo yemveliso: U-doll we-ZIYIUI ozalwe ngokutsha uyilelwe ngamagcisa. Yonke intshi yale dolophana ifana nobomi yenziwe ngesandla, ipeyintwe ngesandla, ulusu yeyona ndawo ikhethekileyo kunodoli, ixesha elininzi lichithwa
Ukuphindukuzalwa kosana oDoli othambileyo wokulinganisa abicah Vinyl Cloth Body 22inch 55cm Lifelike Boy Girl Toy
Idoli yenziwe ngesandla, iya kwahluka kubukhulu kunye nobunzima.
Intloko, iingalo kunye nemilenze: Ukulinganisa i-vinyl yesilicone, Umzimba: Ilaphu elizaliswe ngumqhaphu, lithambe kakhulu.
Iinwele: Umgangatho ophezulu we-Mohair, ukufakelwa ngesandla, unokuhlamba unxibe.Lo ngunodoli wosana, ke iinwele zincinci.Impahla yoDoll: Eyenziwe ngesandla.Ingafanelana neenyanga ezi-0 ukuya kwezi-3 iimpahla ezisandul 'ukuzalwa.
Yenza ngokwezifiso, nceda uthumele umyalezo ukuba ufuna nayiphi na inkonzo eChongiweyo.Ingqinelana neemfuno zokhuseleko ze-ASTM F963 zeAges 3+.
Inkcazo yemveliso: Obu bubugcisa obunodoli obugqwesileyo obenziwe ngumculi odumileyo.Cute kunye nodoli ozelwe ngokutsha onobomi.Okwenziwe ngomgangatho ophezulu wokulinganisa uthambile abicah vinyl.Contactable.Safe engenabungozi, ecocekileyo enobungqongileyo
I-ZIYIUI eyenziwe ngesandla eyenziwe ngeSilicone esine-intshi eyi-18 yokuzalwa ngokutsha kosana oluDoli lwentombazana efana noBomi obuBlue Amehlo
Idoli yenziwe ngesandla, iya kuba yimpazamo kubungakanani kunye nobunzima.
Intloko, iingalo kunye nemilenze: I-Vinyl ye-Silicone yokulinganisa, Umzimba: Ilaphu elizaliswe ngumqhaphu, lithambe kakhulu.
Inkcazo yemveliso: Unodoli omtsha kunye nophilayo ozalwe ngokutsha.Umgangatho ophezulu weSoft Simulation Silicone Vinyl. Ukuchukumisa okunethezekayo: Izinto ezingafunekiyo eziyityhefu, ezicocekileyo zokusingqongileyo.
I-Rebron Baby Doll i-intshi engama-22 ye-intshi entle efana nobomi
Unodoli uza kuza neempahla. Iimpahla ezenziwe ngezandla Ngokwenani lodoli. i-magnetic pacifier inokulingana umlomo.
Iinwele: i-mohair encinci eyenziwe ngezandla, ukunakekelwa kweenwele, ukhathalelo lweenwele okanye amanzi, ikama ngobunono, Unokuhlamba unxibe.
Amehlo: amehlo aphezulu e-acrylic. Impumlo: impumlo zivulekile, ngokungathi unodoli womntwana uyaphefumla. Umlomo: imilebe ngathi yimilebe yomntwana wokwenyani, ithambile, ithambile, ifudumele kwaye ifumile, awukwazi ukunceda kodwa ufuna
I-ZIYIUI i-24 yokuzalwa ngokutsha kosana oluDoli ngokuPhila njengeSilicone ethambileyo i-60 CM Intombazana eyiNtombazana yeVinyl yeZipho zaBantwana zeKrisimesi yeXmas.
Ubunzima: 1.82 Kg
Ubungakanani beDoli: ii-intshi ezingama-24
I-18inch 45 CM iintsana ziphinde zazala inkwenkwe unodoli
Unodoli ozelwe ngokutsha uyilelwe ngamagcisa. Yonke intshi yale dolophana ifana nobomi yenziwe ngesandla, ipeyintwe ngesandla.
Intloko, iingalo ezi-3/4 kunye nemilenze engu-3/4 zenziwe ngezinto ezithambileyo ze-vinyl. Igxalaba kunye nomzimba ngumzimba welaphu kunye nokuzaliswa kwangaphakathi kwe-PP cotton.
Izinwele zizandla zomile mohair (ilaphu elenziwe ngoboya bokwenene bebhokhwe iAngora). Iinwele zinokuba yiyo nayiphi na imilo kwaye zilungiswe, njengeenwele zokwenyani zosana.
Ukuzalwa ngokutsha kosana unodoli Toy ihlolwe yi-SAFE ASTM F963 kunye ne-EN71 yabantwana abaneminyaka emi-3 nangaphezulu.
Idilesi:I-Shijiazhuang Geshuo Trading Co., Ltd.